Ndi akwukwo ma obu akwukwo ohia bu ihe oma? | AASraw
/blog/Orlistat/Olistat enwere nchekwa ma dị irè?
Ihe na 11 / 17 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na Orlistat.
Gịnị bụ Orlistat ntụ ntụ?
Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ maka abụba ọnwụ, ọ na - egbochi ụfọdụ n'ime abụba ị na - eri, na - edebe ya site n'ahụ gị. A na - ejikọta Orlistat na nri belata ka na - edozi ma na - arụzi ihe dị arọ iji na - emeso ibu oke na ndị nwere ihe ize ndụ ụfọdụ (dịka ọrịa shuga, ọbara ọbara dị elu nrụgide, na cholesterol dị elu ma ọ bụ triglycerides) .Ndị mmadụ na-emekarị zụta Orlistat abụba abụba maka ọdịdị dị mma.
Orlistat ntụ ntụ dị mma?
Orlistat ntụ ntụ bụ ihe dị ike nke na-emechi egbugbere ọnụ nke ọrịa bacteria nke dịpụrụ adịpụ na nje bacteria Streptomyces toxytricini, sitere na ọgwụ ndị a na-akpọ ndị na-emechi lipase, ọ bụghị ọrụ site na emetụta ụbụrụ sensọ gị, ma gbochie eriri afọ na-emetụta 25% nke abụba ị na-eri . Ndị na-adịghị etinye obi gị dum na-ahapụ ahụ gị site na mmegharị obi. nke nwere obere mmetụta dị nro ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ na-abaghị uru, ọ bụ ya mere o ji dị mma n'etiti ndị mmadụ. N'aka nke ọzọ, ọ nwere uru ndị ọzọ, Ụfọdụ data na-atụ aro na Olistat na-enyere aka belata ọnụ ọgụgụ nke abụba na-akpọ abụba visceral, nke ejikọtara ya na ụdị ọrịa shuga 2, ọbara mgbali elu, ọrịa obi, na ọrịa strok.
Orlistat ntụ ntụ dị irè?
Na nyocha nke ikpe-azụ, nkezi orlistat ntụ ntụ arọ ọnwụ bụ 50 pasent karịa na Orlistat ma e jiri ya tụnyere placebo na nri. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ịnwere ike ịhapụ 6 n'arọ naanị nri, ịnwere ike ịkwụsị 9 n'arọ na Orlistat. Ọzọkwa, e gosipụtara na ndị na-ewere Orlistat ntụ ntụ na-akwagide ụda dị njọ karịa otu ebe. Maka oke kachasị nke Orlistat, a na-ewere otu capsule na nri ọ bụla (ihe karịrị atọ capsule kwa ụbọchị) tupu, n'oge, ma ọ bụ ruo otu awa mgbe ọ bụla nri. Ọ bụrụ na ịchọta nri ma ọ bụ nri anaghị eri abụba ọ bụla, ọ dịghị mkpa ka ị were capsule.
Ọ bụ Orlistat ntụ ntụ Right maka m?
Afọ ole na ole gara aga, Oké ibu ka bụ nsogbu n'etiti ụwa nile. Ka anyị were America dịka ọmụmaatụ.Americans na-ebuwanye ibu. Onu ogugu ndi mmadu buru ibu na United States abanyewo okpukpu abuo-site na 15 percent na 32 percent-na iri afo abuo gara aga. Iji zọpụta ndị na-achọghị pound ahụ, ndị na-azụ ahịa na-eji ọtụtụ ijeri dollar kwa afọ na ihe ndị na-abaghị uru .Ọ bụrụ na ibu ibu, na ịnwụ na mmega ahụ adịghị arụ ọrụ maka gị, kọọrọ dọkịta gị gbasara usoro nlekọta ihe gbasara ọgwụ. Gbalịa ka ị jiri ntụ ntụ, ma cheta, ị ka ga-agbaso ụzọ ndụ siri ike nke na-agụnye mmega ahụ mgbe nile ma iri nri.
Nkwado maka ewere Orlistat ntụ ntụ
Ị nwere ike ịhụ mmanụ n'ime mmegharị obi gị n'ime ụbọchị ole na ole nke ịbọrọ Orlistat, bụ nke na-adịghị njọ, ọ bụkwa n'ihi mkpochapu abụba a na-enweghị atụ. Ihe gbasara nke puru ime nke a na abawanye mgbe o riri nri buru ibu.
Ọnwụ dị arọ nwere ike imetụta usoro onu ogugu nke a na-eme iji chebe ọnọdụ ndị ọzọ dị ka ọrịa shuga ma ọ bụ cholesterol dị elu.
Ejila Orlistat ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ị dị ime, na-enye nwa ara, na-enwe ntụpọ na orlistat ntụ ntụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị na ya.
Orlistat ntụ ntụ ọ gaghị adabara ndị ọrịa nwere ọrịa ọrịa malabsorption na-adịghị ala ala ma ọ bụ cholestasis.
A na-atụ aro ka ị jiri usoro ọgwụ mgbochi ọzọ dịka nlezianya ma ọ bụrụ na ị na-eji ọgwụ mgbochi ime ihe ugbu a iji gbochie ọdịda n'ihe banyere ọnya afọ ọsịsa.
Orlistat ntụ ntụ nwere ike ịgbanwe ọrụ nke ọgwụ ndị ọzọ ma ọ dị mkpa ịgwa dọkịta gị banyere ọgwụ ọ bụla ị na-eji.
Tags: zụta Olistat ntụ ntụ, Olistat ntụ ntụ
Ebee ịzụta akwa dị ọcha Dianabol ntụ ntụ? HGH usoro onu ogwu: Olee otu esi achoro oke HGH?